Poly anodhinda Scarf vatengi uye fekitori - China Poly Dhinda Scarf Vagadziri
Kana iwe ukaisa pachirafu, zvakapfava uye zvakapfava zvekutarisira ganda, rega unzwe kugadzikana zuva rese. 100% Polyester Yakapetwa Saizi: 35 ″ x 35 ″ / 86cm x 86cm, mativi, saizi size.Size sangana nemutengi chikumbiro. Chinyorwa: 100% polyester Dhizaini: Yakasiyana yekuchenjera dhizaini uye yakanyatso kudhindwa mapateni (single-mativi kudhinda), ane mavara akanaka, akaisvonaka mapatani akanaka. Chipo bhokisi kurongedza. Inokodzera: Square bandana, classy bvudzi scraf. Inogona kushandiswa gore rese. Iwe unogona kupfeka wakakomberedza mutsipa, musoro, wais ...
Inofema polyester chirafu
Mucheka mutsvuku wepolyester
100% viscose yekudhinda sikavha
Kutevedzera silika chekavha shawl